Lalao Candy Rain 3 aterineto. Play maimaim-poana
Lalao Candy Rain 3 an-tserasera
Lalao Online Funny Games Games ho an'ny ankizilahy Games ho an'ny ankizivavy Games ho an'ny ankizy Puzzle lalao Puzzle Mena Blocks 3 misesy Manan-tsaina Voankazo On care Efijery kasihina Html5
Eo anoloantsika dia ny lalao ny Candy Rain 3 orinasa Softgames. Izao no fahatelo tapa- ny piozila lalao izay no mampiditra ny mahery fo vaovao - tovovavy, Anna. Ny asa mahery fo sy mofomamy ho an'ny ankizy kevitra isan-karazany ny matsiro vatomamy. Ankehitriny isika ka te-hanampy azy amin'izany. Ao amin'ny kianja filalaovana, dia hahita ny vatomamy isan-karazany ny endriny sy ny loko. Ny asa amin'ny alalan'ny mifindra azy ireo tari-dalana rehetra mba hanaovana ny andiam- telo. Raha manao ny zavatra nilahatra ho anareo na dia ny isan'ny very hevitra. Ny ambaratonga no lasa rehefa afaka hanadio ny milalao an-tsaha rehetra. Ankoatra ny hevitra anao dia homena isan-karazany ny tombontsoa izay hanampy anao amin'ny asa mafy. Time mametra ny asa na dia afaka manao ny zava-drehetra ianao tsikelikely. Tadidio fa isaky ny ambaratonga vaovao ianao dia ho sarotra kokoa. Candy Rain 3 ny lalao an'ny amin'ny sokajy -tsaina, ary mikendry ny hampivelatra mpilalao hihaino azy sy mirindra fisainana. Noho ny tsara tarehy sy tsara tarehy famolavolana feonkira mpanoratra dia afaka mamorona ny rivo-piainana mahafinaritra ao amin'ny lalao. Izahay antoka fa ianao dia handany fotoana be dia be tao amin'ny tombontsoa sy ny tombontsoa. Download lalao Candy Rain 3 amin'ny fitaovana ary hanomboka hamaha ny piozila izay hanolotra anareo ny mpanoratra. Azonao atao ihany koa ny milalao fotsiny izany ao amin'ny Internet. Fisoratana anarana ho amin'izany tsy mila. Fotsiny mandeha amin 'ny tranonkala sy hankafy ny gameplay.